आज भन्दा ३ बर्ष अगाडी साचेको सपना पुरा भयो, सुभद्राको रुवाइ हैन खुसी आयो ! (भिडियो सहित) – दैनिक नेपाल न्युज
आज भन्दा ३ बर्ष अगाडी साचेको सपना पुरा भयो, सुभद्राको रुवाइ हैन खुसी आयो ! (भिडियो सहित)
काठमाडौँ । दुख: सुख प्रकितीको नियमनै हो तर पनि यो संसारमा दुख; कसलाई पर्दैन र आज हामी संग यस्ती चेली हुनुन्छ जो सुमुधुर स्वरकी धनी गायिका पनि हुन् शुभद्रा पौडेल जो जन्म देखि नै दुखको पोखरीमा डुबेकी छन । स्कट नेपालको अन्तरबार्तामा उनको जीवन कथा सुन्दा तपाईलाइ आज यस्तो लाग्ने छ की उनलाई भाग्यले पक्कै पनि ठगेकै हो त। हुन् त स्कटनेपालले पछिल्लो समयमा धेरै कुराहरु समेट्न सफल भएको छ फेरि पनि आज बिशेष अपडेट सहित नया सामग्री पस्केका छौ ।
शुभद्रा जन्म जातै अपाङ्ग भएर जन्मिएकी पक्कै पनी होईनन् तर जन्मिएको आठ महिनामा अगेनामा परेर उनको दूबै खुट्टाहरु गुम्न पुगे । उनी अहिले कृतिम खुट्टाको सहायता लिदै हिँडडुल गर्न अली अली सक्छिन्। उनका श्रीमान सपाङ्ग हुन्, उनिहरु मायाप्रेमको डोरीमा गासीएर बिबाह को बन्धनमा बाधिएका हुन् । तर बिडम्बना आज उनि श्रीमान बिना एक्लै संघर्षको जिन्दगी काटी रहेकी छन् उनको कहाली लाग्दो जीवन कथा सुन्दा बितिकै सायदै भाबुक न हुने यो दुनियामा विरलै होलान।
सुभद्रा पौडेल को हृदय विदारक पिडा बोकेको र पहिला भन्दा आज भोली उनको आर्थिक लगायत जीवनशैलीको बारेमा थप जानकारी सहित तलको अन्तरबार्ता हेरी दिनु हुन् हार्दिक अनुरोध गर्दछौ । किन उनका श्रीमानले उनलाई एक्लै छोडे बाकी उनको जीवन कहानी तल भिडियो हेरी थाह पाउन सक्नु हुनेछ सक्दो शेयर गरि सम्बन्धित निकाय सम्म पुराई दिनु हुन् पनि हामि अनुरोध गर्दछौ । पुरा भिडियो अन्तिम सम्म हेरिदिनु हुन् र शेयर गरि दिनु आग्रह गर्दछौ।
वरिष्ठ साहित्यकार दीक्षितको निमोनियाका कारण निधन
गोसाइँकुण्डमा स्नान गर्न गएका २३ वर्षीय ढकालको लेक लागेर मृत्यु